ချင်းပြည်နယ်မှ ……….. နွားနောက်များအကြောင်း ကျနော်သိသမျှ……… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ချင်းပြည်နယ်မှ ……….. နွားနောက်များအကြောင်း ကျနော်သိသမျှ………
ချင်းပြည်နယ်မှ ……….. နွားနောက်များအကြောင်း ကျနော်သိသမျှ………
Posted by yaungchikha on Jan 13, 2012 in Copy/Paste | 15 comments
ချင်းလူမျိုး များရဲ့ နွားနောက်အပေါ်ထားရှိတဲ့ ရိုးရာအမြင်နဲ့ နွားနောက်မွေးမြူမှုကို ကျနော့်သင်တန်းမှ ချင်းဆရာမလေး၏ အိမ်တွင် မွေးမြူထားသော နွားနောက်အကြောင်းကို မေးကြည့်မိသလောက် ရွာသူရွာသားများကို မျှဝေပါရစေ။
နွားနောက်ကို ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ ချင်းပြည်နယ်မှာပဲတွေ့ရပါတယ်၊ နွားနောက် မှာ အသားစားသက်သက်မွေးမြူခြင်းဖြစ်ပါတယ်၊ ချင်းပြည်နယ်မှာတော့ နွားနောက်ကို စီးပွားဖြစ်မွေးမြူကြပါတယ်၊ ရိုးရာဓလေ့ကို တန်ဖိုးထား ချစ်မြတ်နိုးသော ချင်းလူမျိုးများနှင့် ငွေကြေးပြည့်စုံသောချင်းလူမျိုးများ၏ ဆုတောင်းပွဲ၊ ရိုးရာပွဲ၊ လက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲ၊ သာရေး၊ နာရေးပွဲများတွင် နွားနောက်သားများဖြင့် ဧည့်ခံလေ့ရှိကြပါတယ်၊
အချို့သောချင်းအမျိုးသားမှ ချင်းအမျိုးသမီးကို ချစ်စကားဆိုရာတွင် နွားနောက်လို နာမည်မကြီးရင်တောင်မှ လက်ခံပေးပါဆိုသော စကားများဖြင့် အသုံးအနှုန်းလည်း ရှိခဲ့သည် (ဆိုရိုးစကား)။
လူတွေကတော့ နွားနောက်လိုမဟုတ်ပါ၊ အပေါင်းအသင်း ဘာသာရေး၊ ဆက်ဆံရေးရှိမှ ကြီးပွားနိုင်သည်ဟု (ဆိုရိုးစကား) များကိုပြော ကြားကြပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့သော ဆိုရိုးစကားများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နွားနောက်များကို ချင်းလူမျိုးများ မည်မျှတန်ဖိုးထားကြသည်ကို သိမြင်နိုင်ပါသည်။
နွားနောက်တွေကို တောထဲမှာ ခြံအကြီးကြီးထားပြီး မွေးမြူရပါတယ်၊ နွားနောက်တွေက တောထဲမှာ အစားကျွေးစရာမလို ပစ်ထားသော်လည်း မိမိတို့၏ အစာကို ကိုယ်တိုင်ရှာဖွေစားပြီး ကြီးထွားကြပါတယ်၊ အစားအစာအနေနဲ့ တောထဲမှာ ပေါက်သော သစ်ရွက်၊ ခြုံပင်များကို စားပါတယ်၊ နွားနောက်များဟာ ဆားကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်၊ သခင်က ဆားကျွေးရာတွင် ဆားကို လက်ပေါ်တင်ပြီး ကျွေးပါတယ်၊ နွားနောက်ကလေးများက လက်ပေါ်မှ ဆားကို လျှာဖြင့်လျှက်ပါတယ်၊ ဆားကျွေးသော သခင်ကိုအသံဖြင့် မှတ်ထားပြီး အဝေးမှ ခေါ်ယူရပါတယ်၊ လေ…….လေ……….လေ…. ဆိုပြီးခေါ်ရပါတယ်၊ လေ……လေ……..လေ…….. ဆိုသော သခင့်ခေါ်သံကြားလျှင် အဝေးကြီးမှ သခင်ရှိရာသို့ လာကြပါတယ်၊ နွားနောက်များမှာ ဆင်တူရိုးမှားများဖြစ်သောကြောင့် နွားနောက်ပိုင်ရှင်များမှ ကိုယ်တိုင်အမှတ်အသားများ လုပ်ပြီး မှတ်ထားကြပါတယ် (ဥပမာ – နားရွက်နောက် )၊
ကျနော်ရေးသားရာတွင် လိုအပ်မှုရှိပါက ရွာသူရွာသားများ ဖြည့်စွတ်ပေးပါရန် တောင်းဆိုပါသည်။
အဖော်တွေနဲ့ အဝေးမှာ တစ်ကောင်တည်း………………..
ဗဟုသုတရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား၊၊
နွားနောက်ဖမ်းပြီး သတို့သမီးမိဘတွေကို ပေးရဒယ်ဒဲ့
ဒဂယ်လို့ သဂျီးသမီးလိုမျိုးဆိုရင်တော့ နွားနောက်ဆယ်ကောင်လောက်ဖမ်းပေးနိုင်မှ
ဟိုတုန်းကတော့ နွားနောက်တွေက တောထဲမှာ ပေါမှပေါလို့တော့ ပြောကြတာဘဲဗျ
သဂျီးသမီးက ခပ်လှလှလေးဖြစ်လို့ နွားနောက်ဆယ်ကောင်ဖမ်းပေးရတာတော့မဆိုဘူး
စားလိုက် အိပ်လိုက် ဘုတ်ပဲမကြီးဆိုရင်တော့ နာပြီသာမှတ်
ဇဂါးမစပ် ရွာထဲက သဂျီးမင်းမှာလဲ သမီးဒေါ်ဒွေဘာဒွေရှိသလားသိခြင်သား
ခိုင်သမီးတော်လေးအတွက် ကြောင်ကြီးမှာ နွားနောက်အကောင် တသိန်းတိတိ ကြိုတင်စံရံသတ် တင်တောင်းပါတယ်။ ပြိုင်ဖက်ရှိခဲ့လျင် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ နွားနောက်အထီးအမ အားလုံးကို ဝယ်ယူသိုလှောင်ထားပါမယ်။ ယေက္ခမသဂျီးရေ ကိုဘေးနွားကင်အစား နွားနောက်ကင်စားဖို့ ပြင်ထားပေတော့။ နွားနောက်နဲ့ မတင်းတိမ်သေးရင် နွားရှေ့ နွားဘယ် နွားညာ နွားအောက် နွားအပေါ် နွားအပြင် နွားအတွင်း အကုန်ကင်ကျွေးပါ့မယ်။
မှတ်ချက်။ စာလုံးပေါင်း အမှန်မှာ နွားနှောက်ဖြစ်သည်။
Ray Exposure လေးရေ…
ဗလိုအရသာရှိတယ် ဗလိုချက်စားရတယ် ..ဗလိုပွဲတော် ဗလိုအထိန်းအမှတ်တွေမှာ
ဗလို အမှတ်တရ လုပ်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာလေးပါ အားဖြည့်နိုင်ရင် ပိုမိုပြည့်စုံသွားမည် ယူဆပါကြောင်း…
နွားနောက်က အဲဒီလောက်တောင် နာမည်ကြီးတယ်ပေါ့.. သူတို.အတွက် ပကာသန နေမှာပေါ့နော်……
ကျွန်တော်တို.ဆီမှာကားတစ်စီးတိုက်တစ်လုံး …. ဆိုသူတို.ဆီမှာ နွားနောက်အရေအတွက်နဲ. မိန်းမ တောင်းလို.ရတာပေါ့နော်..
ဟေဟေ… ဒါဆို မိန်းမယူချင်တဲ့သူ တောထဲသွား နွားနောက် အထီအမ နှစ်ကောင်ဖမ်း သားဖောက်ပြီး စု ဟေ့ဟေ့ မိုက်တယ်..
နွားနောက် အထီး (၂)ကောင်နဲ့ အမ (၂)ကောင်ဖမ်းပြီး သားဖောက်မယ်ဆိုတော့…
တကယ်လို့များ အမ (၂)ကောင်ထဲများ ဖမ်းမိရင် (သို့) အထီး (၂)ကောင်များဖမ်းမိရင်…
အဲဒီအကောင်ကြီးတွေ စာတွေထဲမှာဘဲ မြင်ဖူးကြားဖူးနေခဲ့တာ
အခုမှ ပုံနဲ့ သေချာ မြင်ဖူးတော့တာဘဲ
စကားမစပ် ခရီးသွားတွေပြောတဲ့ ချင်းပျိုဖြူလေးတွေ အကြောင်းလဲ
ဗဟုသုတ အလို့ ငှါ ရေးပေးပါဦးဗျို့ 
နွားနောက်အကြောင်းကို လွင်မိုးခရီးသွားနေသည်ထဲမှာ သိရတယ်ဗျ
အခုနောက်ပိုင်း လွင်မိုးခရီးသွားတဲ့ အကြောင်းတွေမလာတော့ဘူး ဘာလို့လဲသိဘူး
နွားနောက် ကို အခုမှပဲ သေသေချာချာမြင်ဖူးတော့တယ် … ဟိုတခါ လွင်မိုးခရီးသွားနေသည် ကြည့်တုန်းကတော့ အဲ့လို ဓလေ့ရှိတယ်လို့ ပြောတာ ကြားဖူးတယ်..
ဒါနဲ့ အဲ့ဒီဘက်မှာ ပေါက်တဲ့ ပန်းလေးတွေများ အဆန်းလေးတွေ ရှိရင် တင်ပါအုန်းနော် ဥပမာ မြင်ရခဲတဲ့ သစ်ခွလို ပန်းမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့..
ဗဟုသုတလေးတွေ မျှဝေလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
မိတ်ဆွေချင်းမလေးတစ်ယောက်ပြောဖူးတာက မိန်းမတောင်းမယ်ဆိုရင် အဲဒီမိန်းကလေးရဲ့ အကိုတွေ မောင်တွေရဲ့အရေအတွက်အတိုင်း နွားနောက်နဲ့တင်တောင်းရတယ်တဲ့
မွေးချင်းထဲမှာ ယောက်ျားလေး ၆ ယောက်ရှိရင် ၆ကောင်တဲ့
အဲဒီအတိုင်းဆိုရင်တော့ မွေးချင်းထဲမှာ ယောက်ျားလေးများတဲ့သူကိုကြိုက်မိရင်တော့
အပေါ်က ဆြာ/ဆြာမ တွေ
တွက်တာ တကောင်လိုနေသလားလို့ဗျာ …
နွားနောက် ကတော့ အစ်ကိုမောင်တွေ အရေအတွက်အတိုင်းပေါ့နော…
ကျန်ခဲ့တဲ့တကောင်ဆိုတာကတော့ မသေမချင်းရုန်းကျွေးရမယ့် နွားသိုးကြီးကိုပြောတာပါဂျာ..
~~~~~ဟောဒီပခုံးရယ် ဒီဦးနှောက်ရယ် ..မင်းကို ခြစ်တဲ့ …ဒီ blah blah blah …~~~~~~
အကိုမောင်များ မရှိပဲ တဥတည်း ဒမီး ဆို ဘယ်လို လုပ်မလဲ တကောင်တောင်မှ ရမဲ့ ပုံမပေါ်ဘူး။
ကိုအောင်မြင်ရေ….. ဗဟုသုတရတယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးပါနော်…….
ဦးမိုက်ကယ်ရှင့်……….. တစ်ချို့လည်း မပေးရပါဘူး၊ တောင်းတဲ့သူမှပေးရတာပါ၊ မတောင်းတဲ့ သူဆိုရင်တော့ မပေးရပါဘူး၊
ဦးကြောင်ကြီးက ကျနော် စာလုံးပေါင်းမှားရိုက်တာကို အမှန်ပြင်ပြောပေးလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
ဦးကြောင်က နွားနှောက် တစ်သိန်းဆိုတော့ တော်တော် ချမ်းသားတာပဲ……… ဟဲ…… ဟဲ…
ကျနော့်ဆီသင်တန်းလာတက်တဲ့ဦးလေးကတော့ နွားနှောက် ၁၉ ကောင်ပေးရမယ်ဆိုလို့ သူချစ်တဲ့လူကို
ဆြာဂီရှင့် ….. နွားသားချက်သလိုပါပဲ၊ နွားသားအရသာနဲ့အတူတူပါပဲလို့ပြောပါတယ်၊
မင်္ဂလာဆောင်ပွဲတွေမှာတော့ သတို့သားက နွားနှောက် ဘယ်နှစ်ကောင်တင်တောင်းနိုင်တယ်ဆိုတာကို
ပြောပြီး ဂုဏ်ယူကြပါတယ် ………..
ဟုတ်ပါတယ် ကိုရွှေတိုက်စိုး နွားနှောက်က ချင်းလူမျိုးတွေအတွက် နာမည်ကြီးပါ၊ ပကာသနအနေနဲ့ ဂုဏ်ယူစရာ တစ်ခုပေါ့…………
ကိုကြောင်ဝတုတ်ရှင့်………… အထီး နှစ်ကောင်ဖမ်းမိရင် အမ တစ်ကောင်ဝယ်ပြီး မျိုးစပ်မယ်တဲ့၊ အမနှစ်ကောင်ဖမ်းမိရင် အထီးတစ်ကောင်ဝယ်ပြီး မျိုးစပ်မယ်တဲ့ …….. ဟဲ …… ဟဲ……… (နောက်တာနော်)
ဦးတော်ကာရှင့်……… ခရီးသွားများ ပြောတဲ့ ချင်းပျိုဖြူလေးများအကြောင်း ဒီမှာရှိတဲ့ ချင်းပျိုဖြူလေးတွေကို အင်တာဗျူးပြီး တင်ပေးနိုင်အောင် ကျိုးစားပါ့မယ်နော့……….
ကိုဖရဲသီးရှင့်……. လွင်းမိုးက ခရီးမသွားတော့လို့ဖြစ်မယ်…….. လွင်မိုးနဲ့ကြုံရင် အင်တာဗျူးပေးမယ်နော်………….
မမပုခ်ျရေ…… ရှားပါးသစ်ခွတွေက တောင်ပေါ်မှပဲ ရှိတာများမယ်ထင်တယ်၊ အခုတော့ တရုတ်တွေက လိုက်ဝယ်လို့ ကုန်သလောက်ဖြစ်နေပြီပြောတယ်၊ တောင်ပေါ်ရောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် သစ်ခွပန်း အသစ်အဆန်းတွေ တင်နိုင်အောင် ကျိုးစားပါ့မယ်နော်၊
မိုးစက်ရေ……………. တောင်ပိုင်းချင်းတွေကတော့ အဲ့ဒီဓလေ့ရှိပါတယ်၊ မြောက်ပိုင်းချင်းတွေကတော့ အဲ့လိုဓလေ့မရှိပါဘူးလို့ပြောပါတယ်………..
အစ်မဆူးရှင့်…… တဦးတည်းသောသမီးဆို နွားနှောက်ကောင်ရေပိုရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်………
ချင်းသူငယ်ချင်းပြောဘူးတာက အရွယ်ရောက်သော ယောက်ျားလေးဆိုရင်
ပြီးတော့ အခုလိုတောထဲမှာ ဘယ်လောက်ဘဲ ပစ်ထား ပစ်ထား ကိုယ့်နွားနောက် ကိုယ်မှတ်မိ
သတဲ့။ သူ့ကိုစကားပြောရတာ ဝဲလို့စိတ်မရှည်လို့ခဏခဏ ပြန်ပြောရရင် “ကျနော်စိတ်ဆိုးနေသည်”
လို့ပြောတတ်တယ်။ သူ့နာမည်နောက်ဆုံးအလုံးက ” သုမ်း” တဲ့။(နာမည်အပြည့်အစုံအကုန်ပြောလိုက်
လို့ ဒီလာဖတ်ပြီး ကျနော်စိတ်ဆိုးနေသည် ဖြစ်မှာစိုးလို့)။
မှန်လိုက်လေ။ ကိုယ်နွားနောက်ကိုယ်မှတ်မိကြတာ ချင်းထုံးစံလို့ဆိုစမှတ်ပြုကြတာကလား။ မောင်မိုးညို သိသလောက်ကတော့ မင်းတပ်နဲ့ကန်ပက်လက် (၂)မြို့နယ်ပေါ်မှာခွထိုင်နေတဲ့ ချင်းတောင်တန်းရဲ့အလှ “ခေါ်နုသုမ်” လို့ခေါ်တဲ့ ချင်းတောင်ရဲ့အထင်ကရ ၀ိတိုရိရတောင်ထိပ် မှာ”သုမ်” ဆိုတဲ့အမည်ပါသမို့၊ ဆရာသစ်ရဲ့မိတ်ဆွေဟာလဲ ခေသူမဟုတ်တယောက်များဖြစ်နေမလား။ ချစ်စရားချင်းဓလေ့နဲ့ ထူးခြားတဲ့ထုံးတမ်းစဉ်လာတွေကို ပြန်ပြောင်းတွေးမိတိုင်း လွမ်းမိသေးတာကတော့ အမှန်ပါနော်။